Malunga nathi - iFujian Bailong umtya ngentambo ukwenziwa Co., Ltd.
IBHANYA LWEBHALI elasekwa ngo-2003, elilishishini lempahla eyolukiweyo elijongene noPhando noPhononongo, iMveliso kunye neNtengiso. Sigxile kwizintlu ezikumgangatho ophezulu zangaphantsi, iimpahla zangaphantsi kunye nengubo.
Umzi mveliso unamaqela athengisa ubuchwephesha abandakanyeka kurhwebo lwangaphandle kwaye enze ngaphezulu kwe-15 yezigidi zeedola zokuthumela ngaphandle. Inkonzo ebalaseleyo ngexabiso elihle kunye nesitayile esahlukileyo esinomgangatho ophezulu senza iimveliso zethu zisasaze eYurophu, eMzantsi Melika, eMpuma-Mzantsi Asia naseAfrika.
Ukuqhubeka nomgaqo wenkonzo "esekwe kwintembeko, ejolise kwinkonzo", I-BAILONG LACE ikholelwa ekubeni "Ukunyaniseka kuyayiphumeza intsebenziswano, intsebenziswano yenza ubuqaqawuli." Siqinisekisa isicwangciso samazwe ngamazwe, samkela isitayela solawulo lwangoku, siqokelela iitalente kuzo zonke iinkalo, sakha inkcubeko yoshishino. “Zamela ukubangoyena uphambili” ibe ngumgaqo wokuziphatha kuwo wonke umqeshwa. I-BAILONG LACE isungula uhlaselo ukuze ibe lishishini elinophawu olunobuchule kwilizwe jikelele.